Ny lahatsoratry ny lozisialy ao amin'ny Wiki - Ny valin'ny Semalt
Wikipedia no tranokala manan-danja indrindra manome fahafahana malalaka ny fampahalalam-baovao avo lenta amin'ny mpampiasa rehetra manerana izao tontolo izao. Wiki dia mirakitra lohahevitra maro momba ny akademika sy foto-kevitra politika. Vao haingana, ny mpamoaka lahatsoratry ny Wiki sy ny mpirotsaka an-tsitrapo dia nandeha niady hevitra momba ny famafana ny lahatsoratra lava be ao amin'ny vohikala Wikipedia.
Julia Vashneva, Semalt Mpitantana Success Manager, dia milaza fa ny lahatsoratra mikasika ny proteinina "Hemovanadin" dia ny lohahevitra ifanakalozan-kevitra taorian'ny fanombohan'ny sasantsasany naneho hevitra momba ny fanesorana ilay lahatsoratra ao amin'ny Wikipedia. Raha ny filazan'i Andrea James, dia naverina tamin'ny laoniny ihany ilay lahatsoratra. "Hemovanadin" dia lahatsoratra navoakan'ny mpahay siansa tsara indrindra izay manan-danja indrindra amin'ireo manam-pahaizana sy mpianatra.
Nanazava i Andrea James fa ny lahatsoratra "Hemovanadin" dia miatrika ny dikanteny Wiki amin'ny endriny malaza antsoina hoe "deletionism." Ny fanafoanana fampahalalana sarobidy avy amin'ny Wikipedia dia fandrahonana lehibe ho an'ny sehatra fanabeazana izay mampiasa ny Wiki ho loharanom-baovaony lehibe indrindra. Nandritra ny 14 taona, Wikipedia dia nanome fampahalalana tsara ho an'ny mpanjifa mitsidika ny vohikala isan'andro mba hahazoana fahalalana.
Fahatakarana ny fomba fiasan'ny Wikipedia
Ny fiheveran-tena dia fialan-tsasatra sarotra izay tsy azo takarina raha ny fananana sy ny fanarahana ny fomba fiasan'ny Wiki. Wikipedia dia tantanin'ny vondrom-piarahamonina iray ahitana mpilatsaka an-tsitrapo sy mpamoaka lahatsoratra izay mametraka fitsipika sy fitsipika mifehy ny fampiasana Wikipedia. Ny mpamorona dia mamorona sy manova lahatsoratra manampahaizana hita ao amin'ny Wiki.
Mba hampidirina ao Wikipedia, ny ideolojia dia tokony hihaona amin'ireo fenitra sy fitsipika napetraka. Ao amin'ny sehatra hafa, ny fanitsiana sy ny famafana ireo lahatsoratra dia miankina amin'ny fomba fijerin'ny mpanoratra, izay mitranga amin'ny lahatsoratra "Hemovanadin".
Wikipedia dia mifototra amin'ny fototra izay ahazoan'ny mpilatsaka an-tsitrapo ny politikany sy ny torolalana. Na izany aza, ireo mpirotsaka an-tsitrapo samihafa dia mandika ny politika amin'ny fomba hafa, tranga iray izay mitarika ho amin'ny fanafoanana. Ny mpanonta dia manolo-tena sy voatokana ho an'ny fahasalaman'ny tranokala. Na izany aza, ny olona dia manao fahadisoana, toy izany koa ny Wikipediana.
Hemovanadin dia ohatra iray amin'ny lahatsoratra iray izay nampidirina tao amin'ny Wikipedia mba hivoatra sy hanovana azy any aoriana. Na izany aza, ny fitsipi-pitondran-tena tokony hapetraka dia ny hamerana ny famoahana ireo zavatra ara-pampianarana izay tsy mahafeno ny fenitra. Ny fanafoanana ny fitaovana vita dia be dia be kokoa raha ampitahaina amin'ny famoronana lahatsoratra vaovao. Ny famafana lahatsoratra amoron-doko noforonin'ireo tonian-dahatsoratry vaovao dia mety hahakivy, indrindra rehefa misy ny famoahana sy ny mpanonta tsy mahazo fanazavana momba ny antony nesorin'ireo lahatsoratra avy amin'ny Wiki.
Miankina amin'ny fandraisana anjara madinika ny andian-dahatsoratra marobe. Ny famoahana fanovana maro loatra amin'ny sehatra voafaritra dia manova ny teny manodidina ny lahatsoratra. Amin'izao fotoana izao, ny mpamoaka dia nanao fandraharahàna mitadidy fa noho ny lahatsoratra manana loharanom-baovao azo antoka, dia tsy mahafeno ny fepetra voamarina ho azy izany. Ireto misy torohevitra momba ny fanitsiana ireo lahatsoratra amam-borona mba hisorohana ny famafana.
Fikarakarana lahatsoratra miorina amin'ny lohahevitra
Fanatsarana sy fanasokajiana lahatsoratra amam-bozaka ho an'ny fanitarana
Fampidirana loko isan-karazany mba hanamarihana rohy mitondra mankany amina lahatsoratra
Ny teôria ara-politika, ny fampidirana fampahalalana mahasoa ho an'ny lahatsoratra an-dalambe dia tsara lavitra noho ny fanesorana ny lahatsoratra manontolo amin'ny Wiki. Ny endriky ny lahatsoratra iray ihany koa dia manan-danja. Ny lahatsoratra an-dalamby izay tsy mifanaraka amin'ny endriky ny lahatsoratra rakipahalalana dia mety hiteraka olana Source .